Kushone abahlanu beyosokwa eTshwane – LIVE Express
Kushone amabhungu amahlanu (5) abeyosokwa ezikoleni ezahlukene e-Tshwane, e-Gauteng, ngesikhathi sobusika.
Ngokusho kwedolobha lase-Tshwane lamabhungu amahlanu ashone ezigamekweni ezehlukene e-Mabopane, entshonalanga ne-Tshwane kanye nase-Mamelodi, empulalanga ne-Tshwane.
Kubikwa ukuthi amanye amabhungu abeyosokwa ashone ngenxa yomlilo oshise isikole sokusoka e-Mabopane, kanti omunye ushone ngenxa yezizathu ezingadalulwanga emva kokungeniswa esibhedlela, i-Mamelodi Hospital.
uNgqongqoshe wezokubusa ngokubambisana, ezomdabu kanye nezezindlu e-Gauteng, u-Paul Mashatile, uthi kuyaxaka ukuthi lezi zigameko zokufa zenzeke e-Tshwane, nokuyilapho kunesibalo esiphezulu sezikole ezibhalisiwe nezisemthethweni e-Gauteng.
Umnyango uthi uzoqhubeka nokusebenzisana namaphoyisa, umnyango wezempilo, umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi, amakhosi kanye nomphakathi ukuqinisekisa ukuthi kugwenywa izigameko zokufa kanye nokulimala ngesikhathi sokusoka.